Cali Gacal Casir oo Baarlamaanka deg deg ugu yeeray M/Ku xigeenka Galmudug oo ka carooday war lagu qoray?
10 March, 2018 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb ayaa Xidlhibaanada Baarlamaanka Maamulkaasi ugu baaqay in ay tagaan Caasimadda Galmudug si ay kaga qeyb qaataan dhameystirka Heshiiska.
Qorshaha Xildhibaanada loogu yeeray waxaa kamid ah kala tashiga Dastuurka Galmudug iyo kordhinta Baarlamaanka Maamulkaasi.
Gudoomiye Casir ayaa sheegay in heshiiskaan uu u dhaxeeyo Bulshada Galmudug, waxa uuna Meesha ka saaray warar sheegaya in uu jiro Caqabado hortaagan dhameystirka Heshiiska.
Dadka Galmudug dega waxa uu ka dalbaday Cali Gacal Casir in ay garab istaagaan Maamulka Galmudug, waa uu sii hadlay waxa uuna tilmaamay in qeybihii ugu dambeeyay ee Midnimada Galmudug lasoo gaaray.
Maxamed Xaashi Cabdi (Carabey) Madaxweyne Ku xigeenka Galmudug oo isna hadlay waxa uu sheegay in laga been abuurayo howlaha Soconaya, balse warar been abuur ah lagu faafinayo Baraha Bulshada sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu Bogaadiyay go’aanka Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ugu yeeray Xildhibaanada in ay tagaan Magaalada Dhuusamareeb si ay kaga qeyb qaataan kaalintooda ku aadan dhameystirka heshiisyadii lagu mideynayay labada dhinac.
Magaalada Dhuusamareeb waxaa ku sugan Afarta Mas’uul ugu sareyso Maamulkaasi oo kala ah:- Madaxweynaha, Madaxweyne Ku xigeenka, Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Madaxa Xukuumadda Galmudug.
Wadahadalo aanan kala go’ laheyn ayaa ugu socda Magaalada Dhuusamareeb kaa oo ku saabsan sidii loo dhameystiri lahaa Howlaha Maamulka, iyo in ay Madaxdu ka tashtaan sidii Beesha Caalamka looga raadin lahaa Lacagihii ay ku yaboobeen si Maamulka geeddi socodkiisa Dhuusamareeb uu u galo.
Xildhibaan Mahad Salaad Oo Si Maldahan U weeraray Salaad Cali Jeelle
Cali Gaab oo ka hadlay Qarax si dirqi ah uu kaga badbaaday
Muxuu Salka Ku Hayaa Khilaafka Laftagareen iyo Gudoomiyihiisa Baarlamaanka
the background of the new autonomy president Visits: 695972
Walaalkiisa Dile Oo Maanta Mansab Doon Ah Visits: 34276
Hadakii Ra'isul Wasaare Kheyre oo Jug culus ku noqotay Madaxweyne Farmaajo Visits: 53
Booliiska Kenya oo dilay nin Al Shabaabnimo uga shakiyeen Visits: 25
Maxaa Kasoo Baxey Kulankii Framaajo, Kheyre iyo Labada Gudoomiye ee Maanta Visits: 52
KULANKII DOWLADA FEDERAALKA & MAAMUL GOBOLEEDYADA SHIRKOODA LOOGA GOGOL XAARAYEY OO FASHIL KU DHAMAADEY. Visits: 195
Dowladda Somalia oo Mishiinada Ogsijiinka & qalab kale gaarsiisay Jubbaland Visits: 27